yourname@gmail.com နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Chatroom တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရပါ&#4 - MYSTERY ZILLION
[email protected]m နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Chatroom တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရပါ&#4
June 2009 edited December 2009 in Web Base
[email protected] နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Chatroom တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲဗျာ... ပြောပြကြပါခင်ဗျား... Group တစ်ခုအတွက် Chatroom လုပ်ချင်လို့ပါ...:77::77::77::77::77:
အရင်ဆုံး partychat2 ကို add လုပ်လိုက်
/create roomname password
ပြီးရင်ကိုယ့် Group ထဲ၀င်ပြောချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို
partychat2 ကို invite လုပ်ခိုင်းပြီး
/join roomname password လုပ်ခိုင်းလိုက်
ဒါဆို ok ပြီ။
room ထဲ၀င်ထားတဲ့သူတွေကြည့်ချင်ရင် /list
I don't mean that bro... ... I want to make eg. [email protected] Chatroom in G-talk... and everyone who wanna chat in that Chatroom must invite [email protected] in their acc...
အစ်ကိုရေ အဲဒီ့ချက်ရွန်းကို နာမည်တစ်ခုနဲ့စထောင်ပြီး ဆိုပါတော့ ၊ အဲဒိ့နာမည်နဲ့ စထောင်တဲ့ လူက ဒီချက်ရွန်းရဲ့ owner ဖြစ်ကောလား ဒီချက်ရွန်းကို password ပေးထားပေမယ့် ဒီ password ကို ချက်ရွန်းထဲက တစ်ယောက်ယောက်က တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ကိုပေးလိုက်ရင် အဲဒိကတစ်ခြားလူကလညး် ကျွန်တော်တို့ ထောင်ထားတဲ့ ချက်ရွန်းနာမည်ထဲကို၀င်လာမှာပေါ့နော် ၊ အဲဒိလို၀င်လာရင် သူ့ကို စထောင်တဲ့သူက ဘန်းဖြစ်လို့ရလား တစ်ကယ်လို့ရရင်ဘယ်လိုဘန်းတယ်ဆိုတာကိုပါ ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်
partychat2 မှာလုပ်လို့ရတဲ့ command တွေကို
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုတော့ ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်...:103:
ကျွန်တော်မေးတာကို ဖြေပေးကြပါဦးဗျာ.. တကယ်အသုံးလိုနေလို့ပါ... ကျေးဇူးပါ.... :77::77::77:
ပထမဆုံး python ကိုဒေါင်းပြီး install လုပ်
ပြီးရင် အဲဒီမှာ bot ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး python နဲ့ run ရတယ်
အဲဒီမှာ username နဲ့ password ကို config ဖိုင်မှာ ၀င်ပြင်ဖို့တော့လိုတယ်
အသေးစိပ်ကိုတော့ အဲဒီမှာပဲ ၀င်ဖတ်လိုက်ပါနော်
စိတ်တော့မရှိပါနဲ ့အစ်ကိုရယ် အစ်ကိုပြောတဲ့ဟာ ကို စိတ်၀င်စားလို ့ကျွန်တော့် Gmail နဲ ့စမ်းတာမရဘူးဖြစ်နေတယ် ။ :106::106:
paychat2 ကို add လိုက်ပေမဲ့ အစ်ကိုပြောတဲ့ Command တွေကို ဘယ်မှာရိုက်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ် .... ..... နဲနဲ သေသေချာချာလေး ရှင်းပြပါဦး ... :D
Aung Pyae Phyo 24 wrote: »
အကိုမရလို့ပေါ့ ရရင်ကျနော်တော့ လေးစားသွားမှာ
paychat2 ဖြစ်နေတယ်အကို partychat2 ဖြစ်ရမှာလေ။
ဒါပေမဲ့ partychat2 လည်း /commands ခေါ်လို့မရဘူး။
[FONT=arial,sans-serif]1 ) [email protected][/FONT] ဒါလေးကို add မယ်။
2) box ထဲမှာ [FONT=arial,sans-serif]/make [group_name] [optional_password] ရိုက်မယ်[/FONT][FONT=arial,sans-serif]။
3) တစ်ခြားသူကို join ခိုင်းမယ် /join [group_name] [optional_password][/FONT]
4) Q ပြီးရင် ထွက်မယ် [FONT=arial,sans-serif]/leave[/FONT]
5) မသိတာရှိရင် /commands ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်။
ရဘူးဗျို့ google ကတောင် သတိတွေလှမ်းပေးနေတယ်ဗျ